Otu esi abanye okwuntughe Grub2 | Site na Linux
Otu esi abanye paswọọdụ Grub2
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | GNU / Linux, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
E nwere ọtụtụ ụzọ iji chebe Nri na nkesa anyị kachasị amasị anyị. Agbalịrị m ụdị a na Nke a ọzọ, ma ọ dịghị onye rụụrụ m ọrụ. Eleghi anya, m na-efu ihe ma ọ bụ ihe ihere, n'ihi na mgbe ị na-ewepụta okwuntughe na Hash, ihe ahụ dị nchebe karị.
Mana agbanyeghị, m ga-egosi gị otu nke rụụrụ m ọrụ ebube, nke ahụ na-ajụ m maka aha njirimara na paswọọdụ mgbe m gbalịrị idezi ya Nri. Nzọụkwụ ndị dị mfe:
1- Anyị na-edezi faịlụ ahụ /etc/grub.d/00_header:
2- Anyị na-agbakwunye usoro ndị a na nke ikpeazụ:
N'okwu m, ahọrọ m aha otutu m dị ka onye nlekọta, mana ị nwere ike ịhọrọ ihe ọ bụla ịchọrọ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ, anyị nwere ike itinyekwu ndị ọrụ, ọ ga - adị ka nke a:
Anyị na-echekwa ma melite ya Nri.
Anyị reboot na mgbe anyị na-anwa dezie Nri na igodo "na" Ọ ga-ajụ anyị maka aha njirimara na paswọọdụ 😀
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Otu esi abanye paswọọdụ Grub2
Ihe 8 kwuru, hapụ nke gị
iberibe nna ukwu dijo
Zaghachi ihunanya iberibe
Amaghị m ma ọ bụrụ na ịmara na obere oge gara aga, agbakwunyere m ụzọ ahụ na Wiki GUTL. N'uche m, ihe ọzọ ga - atọ ụtọ ịme bụ nkuzi banyere otu esi echekwa paswọọdụ iji banye na menu GRUB. You na-enwe obi ụtọ? 😉
N'ezie enwere ike ime ya. Aga m etinye ya n'uche ..
Ndewo, ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ tinye nhọrọ hash.
Nke mere na ọ dị mma n'anya ma na-arụ ọrụ.
Tozọ isi mee ya bụ otu a.
Ga-agbakwunye usoro ndị a na njedebe nke faịlụ /etc/grub.d/40_custom
setịpụrụ superusers = »onye ọrụ»
password_pbkdf2 onye ọrụ na ebe a niile hash nke emepụtara site na grub-mkpasswd-pbkdf2
chekwaa ma gbalite mmelite-grub
na voila =)
Chaị! Daalụ maka n'ọnụ 😉
Daalụ, emechara m chọta ihe m na-achọ.
Ọ rụụrụ m ọrụ. Daalụ nke ukwuu 🙂
Naanị ime ka ndị ahụ kpughere. Ezie na usoro ahụ dị mfe itinye, echere m, mezie m ma m mehie, ọ dị mfe ngwangwa.
Ule: Ọ bụrụ na m ga-arụ ọrụ ndụ, enwere m ike ịrịgo diski ma gụọ faịlụ ahụ a jụrụ, ebe ọ bụ na ederede doro anya. Site na ozi enwetara, ịnwere ike idezi ihe iwe iji nweta ohere mgbọrọgwụ.
Ana m echere azịza gị.
Zaghachi ka bapgnu
Orta: supert customizable Gtk isiokwu
Gbanwee okwuntughe mgbanye na Debian / LMDE